नसर्ने – Page4– Health Post Nepal
रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका वडा नं. ३ दर्खासी गाउँकी ८४ बृद्धा नन्दकला उपाध्याय नियमित पुजाआजा गछिन् । पूजाआजा गर्नुको उनको उद्देश्य सन्तानको खुसी हो ।तर दर्भााग्य उनको परिवारमा बर्षेनीजसो पीडामाथि पिडा थपिँदै गएको छ । नन्दकलाको परिवारले परिवारका सदस्यमा मात्र...
कसरी हुन्छ मस्तिष्कघात ? यस्तो छ उपचार
हृदयाघात विश्वभर नै एक खतरनाक मृत्युको कारणमध्ये पर्छ । विश्वमा हुने मृत्युमध्ये एकतिहाइ अर्थात् मुटुरोग विश्वमा हुने मृत्युका कारणमध्ये एक नम्बरमा पर्छ । पछिल्लो समय मानिसको परिवर्तित जीवनशैलीले यसमा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ । भारतीय फिल्म इन्डस्ट्रीका बहुचर्चित...
धुलिखेल खावाकी परिधि गिरी बल्ल ७ वर्ष टेकिन् । नियमित स्कुल गइरहने उनी कहिले खुट्टा त, कहिले ढाड दुख्यो भनेर गुनासो गर्न थालिन् । आमाले धुलिखेल अस्पताल पुर्याइन् । जाँच पनि भयो, चिकित्सकले केही बोलेनन्, सीधै कान्ति बाल अस्पतालमा...
क्यान्सरको सुुरुवाती लक्षण यदि समयमै पहिचान गर्न सकियो भने खतरनाक स्टेजसम्म जानबाट रोक्न सकिन्छ । सुरुवाती अवस्थामा पहिचान भयो भने उपचार सजिलो हुन्छ र यसकै कारणबाट हुने मृत्युलाई रोक्न पनि सकिन्छ । एक अनुुमान अनुसार पुरुषमा क्यान्सरबाट हुने मृत्युमा...
मध्यरातमा चिच्याउँदै उठ्छन्, आफन्तलाई पनि नजिक पर्न दिन्नन्
कपिलवस्तु–५ बहादुरगन्जकी १२ वर्षीया बालिका १९ वर्षीय किशोरबाट बलात्कृत भइन् । घटनापछि उनमा एकोहोरो हुने, बोल्न डराउने, नजिकै कोही मान्छे आउँदासमेत तर्सिने समस्या देखापर्न थाले । परिवारले प्रसूतिगृह ल्यायो । दुई साता राखेर उनलाई घर फर्काइयो । तर समस्या...
किन बढ्दैछ युवापुस्तामा मानसिक समस्या ?
काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालको तथ्यांकले युवा मानसिक रोगीहरूको संख्या बढ्दै गएको बताएको छ । महारागन्जस्थित त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा दैनिक २० देखि २५ को संख्यामा मानसिक रोगी आउने गर्छन् । त्यसमध्ये युवाको संख्या १० देखि १५ भएको अस्पतालको मानसिक विभागको तथ्यांक...
बिर्सने रोगको जोखिम पुरुषभन्दा महिलामा बढी
अल्जाइमर स्मृतिक्षय हुने रोग हो । विस्तारपूर्वक भन्ने हो भने अल्जाइमर मस्तिष्कका विकृतिहरूको समूहगत रोग हो, जसले सोच, स्मृति, बोली, निर्णय क्षमता, छनोट तथा व्यक्तित्वलाई दुष्प्रभावित गर्छ । यो रोगले व्यक्तिको व्यवहार तथा व्यक्तित्व परिवर्तन गर्ने, बिसर्ने, संशय पैदा...
खुट्टाको सामान्य दुखाइमा पनि बाथ भयो कि भनेर आशंका गर्नेको भन्दा ठूलो संख्या बाथले गम्भीर रूप लिइसक्दा पनि केही दिन हेरौँ भन्दै खपेर बस्नेहरूको छ । धेरैलाई हातखुट्टाको दुखाइ बाथ हो कि होइन भन्ने छुट्याउन कठिन पर्छ । वेलैमा...
बेवास्तामा महिनावारी बन्द, महिला स्वास्थ्य जोखिममा